Soo-saarid / Caawinta Dib-u-dejinta Guryaha Guurguurta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Housing|Soo-saarid / Caawinta Dib-u-dejinta Guri Guuritaan
Soosaarayaasha / guryaha guurguura ee guryaha gadaal ka kireysan waxay xaq u yeelan karaan ilaa saddex bilood oo ah kirada bixinta Barnaamijka Gargaarka Kireynta Evidence (ERAP). Halkan guji si aad uga hesho adeeg bixiye degmadaada. Ogsoonow in dhammaan barnaamijyada maxalliga ahi aysan diyaar u ahayn inay aqbalaan codsiyada weli. Si aad u hesho ogeysiis emayl marka adeeg bixiyeyaasha lagu daro liiska, halkan ku qor.
Soo-saarid / Caawinta Dib-u-dejinta Guri Guuritaan
Khariidada kore waxay muujineysaa bulshooyinka guryaha soo saaray / guurguura ee ka diiwaangashan Waaxda Dakhliga. Guryaha buluugga ahi waxay metelaan bulshooyinka diiwaangashan. Dhibcaha "X" waxay matalaan bulshooyinka xirmay 5tii sano ee la soo dhaafay. Dhagsii dhibic kasta si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah. Guji astaanta falaarta ee ku taal geeska bidix ee kore si aad u eegto oo aad u xulato lakabyada khariidadaha.
Haddii aad leedahay gurigaaga la soo saaray ama mobilka leh oo aad ku nooshahay beel ku dhow Gobolka Washington, waxaad u-qalmi kartaa kaalmada dib-u-dejinta. Caawinta dib-u-dejinta guryaha la soo saaray ee guurguurta waxaa la siiyaa qoysaska danyarta ah ee u qalma marka horeba, marka horeba loo adeego, iyadoo mudnaanta la siinayo kireystayaasha jardiinooyinka u xiran sababo la xiriira welwelka caafimaadka iyo amniga ama khayaanada milkiilayaasha baarkinka.
Barnaamijka Caawinta Dib-u-dejinta ee Guryaha la Soosaaray / Moobaylku ("Barnaamijka Caawinta Dib-u-Dejinta") wuxuu siiyaa gargaar maaliyadeed kireystayaasha u qalma kharashyada la oggol yahay ee gaaraya $ 7,500 ee qayb ka mid ah ama ilaa $ 12,000 guri qaybo badan ka kooban.
Halkan guji si aad u hesho agabyada dalabka
Si desea una aplicación u otras formas en español, por favour envíe un correo electrónico a omh@commerce.wa.gov o dejar un mensaje en 800-964-0852 o (360) 725-2971. Podemos devolver su llamada con un intérprete telefónico.
Haddii aad su'aalo qabtid ama aad u baahan tahay arjiga oo ku qoran luqad aan Ingiriis ahayn, fadlan nagala soo xiriir omh@commerce.wa.gov, taleefan bilaash ah 800-964-0852, ama (360) 725-2971.
Haddii Ingiriisigu aanu ahayn luqaddaada koowaad, dib ayaan kula soo soo xiriiri doonnaa annaga oo kaashaneyna turjubaanka taleefanka ee luqadda aad ugu kalsoon tahay.
Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo ee Ku Saabsan Kaalmada Dib u Dejinta
Sideen u codsadaa kaalmada dib u dejinta?
Ka codso macluumaad iyo codsi Xafiiska Soo-saarista / Caawinta Dib-u-dejinta Guryaha Guurguurta ee omh@commerce.wa.gov, taleefan bilaash ah 800-964-0852, ama 360-725-2971.
Ayaa u qalma gargaar?
Kireystayaasha lahaa oo ku noolaa gurigooda waqtiga ogeysiiska xiritaanka la soo saaray, waxayna la kulmaan tilmaamaha dakhliga (in ka yar 80% ee Aagga Median Income (AMI) ee degmada guryahoodu ku yaal), waxay xaq u leeyihiin gargaar. Kireystayaasha ku nool bulshada loo xiray arrimo caafimaad iyo badbaado ama khayaanada milkiilaha bulshada ayaa marka hore la caawiyaa. Dhammaan kaalmooyinka kale waxay ku saleysan yihiin soo-hor-istaag, wax loo adeego.
Gurigeygu waa gaari madadaalo (RV), isjiidka socdaalka, ama nooca baarkinka, laakiin waxaan ku noolahay sannadka oo dhan. Xaq ma u leeyahay caawimada dib u dejinta?
Milkiilayaasha baabuurta madadaalada (RVs) iyo moodooyinka baarkinka sida lagu qeexay RCW 59.20.030 waa ma u qalma kaalmada dib u dejinta.
Xagee laga yimaadaa lacagta kaalmada dib u dejinta?
Sanduuqa Dib-u-dejinta ee Soo-saarista / Mobilada Guriga Guurguura waxay bil walba ka heshaa lacag laga soo ururiyey markii guri laga iibsanayo beel soo-saare / guurguurayaal ah. (RCW 59.21.050)
Ma jiraan wax lacag ah oo ku hadhay sanduuqa?
Sanduuqa wuxuu lacag ka helaa bil kasta soosaaray khidmadaha macaamilka guriga. Qadarka lacagta ee ku jira sanduuqa waxay kuxirantahay tirada jaaliyadaha xirmaya waxaana la heli karaa marka ugu horeysa ee la yimaado, marka hore waxay u adeegtaa inta lacag la heli karo.
Maxay yihiin xadadka gargaarka dib u dejinta?
Milkiilayaasha guryaha qaybta kaliya waxay u qalmaan gargaar ilaa $ 7,500. Milkiileyaasha guryaha hal qeyb leh oo leh dhisme dheeri ah oo la dhisay ama guryo qaybo badan ka kooban ayaa u qalma ilaa $ 12,000. Haddii aad leedahay hal qayb oo leh meel lagu noolaado oo dheeri ah ama qaybo badan, waa inaad soo gudbisaa sawirrada goobta bannaan ka hor intaadan guurin.
Sidee barnaamijku u bixiyaa kaalmada dib u dejinta?
Caawinta dib u dejinta waxay noqon kartaa isku darka caawimaad lacageed iyo dib u bixinta kharashyada la xiriira dib u dejinta illaa xadka gargaarka dib u dejinta. Kireyste xaq u leh wuxuu heli karaa ilaa 40% ee xaddidooda caawimaadda lacag caddaan ah si uu u helo guryo kale haddii ay sameeyaan qorshe guryahooda looga saarayo qandaraasle ama habka loo qoondeeyey. Barnaamijku wuxuu dib u soo celin doonaa inta hartay ee caawimaadda marka aan helno rasiidhada iyo xaqiijinta bixinta kharashyada la xiriira dib u dejinta.
Waa maxay howsha meeleynta?
Nidaamka meeleynta waxaa loola jeedaa qof bixiya lacag inuu guriga kaaga saaro beerta adiga aawadeed. Qofkan waxaa looga soo celinayaa kharashaadkaas inta ugu badan ee gargaarka aad xaq u leedahay. Wixii macluumaad dheeraad ah waad ka akhrisan kartaa Lacag celinta Muunada ee Dib-u-bixinta Kaalmada Dib-u-dejinta.
Maxaan ugu isticmaali karaa kaalmada lacageed?
Waxaad u isticmaali kartaa kaalmadaada lacagta si aad u hesho meel kale oo aad ku noolaato, tusaale ahaan, kireysato aqal ama guri; Hoos-u-bixinta, iwm. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa kaalmadaada U-Dabaal-galka, alaabada xirxirashada, keydinta ku-meel-gaarka ah, iwm. La xiriir barnaamijka haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
Kharashaad noocee ah ayuu barnaamijku soo celin doonaa?
Barnaamijku wuxuu soo celin doonaa kharashyada laxiriira dib udajinta. Tan waxaa ka mid ah ka saarista gurigaaga iyo dib u dhigid meel kale ah ama ka saarista gurigaaga duminta iyo tuurista iyo helitaanka guri kale. La xiriir barnaamijka haddii aad su'aalo qabtid.
Waa maxay kharashyada aan la soo celin karin?
Barnaamijku dib uma soo celin doono shaqada milkiilaha guriga ama kharashyada aan la xiriirin dejinta. Haddii aad dooratay inaad ka saarto gurigaaga oo aad meel kale ku rakibto, barnaamijku dib uma soo celin karo kharashka lagu rarayo dhismayaal kala duwan, dhul qurxin, iibsashada qalab, cashuuraha guryaha, iyo dib u habeyn ama hagaajin aan loo baahnayn dib u dejin.
Muddo intee le'eg ayey qaadanaysaa in la helo kaalmada dib u dejinta markii codsigayga la dhammaystiro?
Ma qiyaasi karno inta ay qaadaneyso howlaha gargaarku maxaa yeelay waxay kuxirantahay lacagta laga heli karo sanduuqa iyo tirada kireystayaasha xaqa u leh ee codsanaya.
Haddii aan guurinayo gurigeyga, sideen ku helayaa xamuul?
1) La xiriir mulkiileyaasha kale ee guryaha ee aad taqaanid kuna kalsoon tahay kuwaasoo ku qancay gaadiidleyda ay shaqaaleeyeen.
2) Kafiiri hoosta "Guryaha Soosaarashada-Mobilada-Gaadiidka" ee galkaaga taleefanka ama internetka.
MUHIIM: Haddii xamuulkaagu rakibayo gurigaaga, ka hubso Waaxda Shaqada iyo Warshadaha si aad u hubiso in gaadiid-qaaduhuhu yahay rakibaye shahaado haysta. Wac bilaash lambarka 800-647-0982 ama www.lni.wa.gov/TradesLicensing/FAS.
Milkiilaha bulshada aan u guurayo miyuu ku qasbi karaa gurigeyga inuu la kulmo dabka, badbaadada ama xeerarka dhismaha?
Haa, haddii mulkiiluhu uu raaco xeerarka ku jira RCW 59.20 ama sharciyada kale ee la xiriira. (RCW 59.20.070 (8))
Ma magaalo ama degmadu ma u baahan kartaa gurigeyga inuu la kulmo dabka, nabadgelyada, ama xeerarka dhismaha?
RCW 59.21.105 waxay u baahan tahay magaalooyin iyo degmooyin inay ka dhaafaan dabka, nabadgelyada, ama xeerarka dhismaha haddii koodhadhka la isticmaali doono oo keliya maxaa yeelay waa inuu guri u guuraa xiritaanka ama beddelaadda darteed. Laakiin, waxaa jiri kara sababo kale oo magaalo ama degmo u adeegsato xeerarkooda. Fadlan la xiriir xafiiska nambarka dhismaha ee magaalada ama degmada aad rabto inaad ka guurto ka hor intaadan qorsheynin inaad u guurto gurigaaga. Waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad la hadasho qareen.
Kheyraadka loogu talagalay Dadka degan Xadiiqooyinka Xiritaanka
Kheyraadka Sharciga iyo U-doodista
Ururka Milkiilayaasha Guryaha La Soosaaray (AMHO) - AMHO waa kheyraad loogu talagalay milkiileyaasha guryaha la soo saaray / guurguura ee ku nool bulshooyinka guryaha soo saara / guurguura.
Goobaha Barnaamijka Waxqabadka Bulshada - Barnaamijyada Waxqabadka Bulshada waxay siisaa adeegyo shaqsiyaadka iyo qoysaska ku nool beeshooda.
La talinta sharciga ee dhalinyarada iyo caruurta (LCYC) - Barnaamijka guri la'aanta dhalinyarada ee LCYC wuxuu ka caawiyaa carruurta arrimaha sharciga ee la xiriira hoy la'aanta.
Soosaaray / Sharciga Mulkiilaha-Kireyste Guriga Guurguura (59.20 RCW) - Sharciga Mulkiile-Kireyste wuxuu siinayaa badbaado sharci dadka deggan guryaha guurguura iyo kuwa la soo saaray.
Soosaarista Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka Guriyeynta (MHDRP) - Barnaamijkani wuxuu u fidiyaa adeeg xallinta khilaafaadka milkiileyaasha iyo kiraystayaasha guryaha la soo saaray / guurguura.
Milkiilayaasha Guryaha Guurguura ee Ameerika (MHOA) - MHOA waxay bixisaa macluumaad kusaabsan Sharciga Mulkiilaha-Kireystayaasha iyo qareennada maxalliga ah ee pro-bono.
Mashruuca Caddaaladda ee Waqooyi Galbeed - Mashruuca Caddaaladda Northwest wuxuu siin karaa caawimaad sharci ama talo dadka deggan xadiiqooyinka la xiro.
Ururka Kireystayaasha ee Gobolka Washington - Ururka Kireystayaasha wuxuu u shaqeeyaa sidii u-doodaha kiraystayaasha, wuxuu siiyaa la-talinta xuquuqda kiraystayaasha iyo Kiliinikada Walk-In.
Washington Line-2 Kheyraadka iyo shabakada - Macluumaadka adeegga bulshada iyo tixraacyada.
YouthCare - YouthCare waxay siisaa waxbarasho, ka hortagga hoylaawe, caawimaad shaqo, hoy iyo guryo loogu talagalay dhalinyarada Seattle. Waxay sidoo kale adeegyo u fidiyaan dhalinyarada soo martay dhaawacyada.
Kheyraadka Dhaqanka iyo Socdaalka - Gobolka oo dhan
Adeegga La-talinta Aasiya iyo Gudbinta (ACRS) - ACRS waxay awood siineysaa Aasiyaanka Ameerika, Jasiiradaha Baasifiga, iyo bulshooyinka kale ee soogalootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah iyagoo siinaya adeegyo badan oo luqado iyo dhaqamo kala duwan leh.
Adeegyada Beesha Lutheran Northwest - Adeegyada Beesha Lutheran waxay ka caawisaa deganayaasha WA, qoysaska, iyo soogalootiga adeegyo kala duwan, oo ay ku jiraan adeegyada luqadda, tixraacyada bulshada, iyo isku xirnaanta baahiyaha aasaasiga ah sida cuntada, guryaha, iyo shaqada.
Diiwaanka Adeegyada Sharciga ee Socdaalka Qaranka - Shabakadda U doodaha Socdaalka waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha inay ku raadiyaan adeegyada sharciga socdaalka lambar zip ama xarunta lagu hayo. Buugga waxaa ku jira kuwa aan macaash doonka ahayn oo bixiya adeegyo bilaash ah ama qiime jaban.
Adeegyada Qaxootiga iyo Muhaajiriinta Waqooyi Galbeed - Adeegyada Qaxootiga iyo Muhaajiriinta waxay siisaa maareynta kiiska, macluumaad iyo u gudbinta ilaha, kaalmada shaqada, adeegyada jinsiyadda, adeegyada tarjumaadda, iyo guryaha dakhligoodu hooseeyo
Kheyraadka Dhaqanka & Socdaalka - Gobol iyo Degmo
Xarunta Macluumaadka iyo Adeegga Shiinaha (CISC) (Seattle) - CISC waxay ku siisaa ilo dhaqameed iyadoo siineysa macluumaad, gudbin, adeegyo bulsho, iyo taageero. Waxay bixiyaan fasalo ESL iyo dhalasho, adeegyada qoyska iyo dhalinyarada, rabshadaha qoyska iyo adeegyada dhibbanayaasha dambiyada, iyo xarun farsamo.
El Centro de la Raza (Seattle) - El Centro de la Raza waxay u dooddaa, wax barataa, oo abaabushaa iyadoo ka wakiil ah bulshada Latino. Waxay caawiyaan dadka laga tirada badan yahay ee la soo deristay hoy la'aanta.
Adeegyada Geeska Afrika (HOAS) (Seattle) - HOAS waxay u fidisaa muhaajiriinta Bariga Afrika iyo qaxootiga luqado badan iyo dhaqamo kala duwan iyada oo loo marayo waxbarasho, gudbin, iyo taageero.
Xarunta Caawinta Muhaajiriinta ee Kitsap (KIAC) (Degmada Kitsap) - KIAC waxay bixisaa adeegyada socdaalka iyo luqadda, waxayna martigelisaa dhacdooyinka qoyska. Munaasabadahaan, waxyaabo ayaa la siiyaa dadka u baahan iyo rugo caafimaad ayaa la heli karaa.
Ururka Haweenka Kuuriya ee Washington (KWA) (Western WA) - KWA waxay fidisaa adeegyo iyo adeegyo bulshada Kuuriyada Galbeed ee WA.
Guriga Tacoma Community (South Puget Sound) - Tacoma Community House waxay bixisaa waxbarasho iyo umeerin, caawimaad shaqo, muhaajirnimo iyo muwaadinimo, iyo u doodista dhibanayaasha dambiyada
Golaha Bulshada Galbeedka Afrika (WACC) (Seattle) - WACC waxay siisaa barnaamijka waxbarashada hore qoysaska ka soo jeeda dhaqammada oo dhan, waxay siisaa adeegyo socdaal oo sharci ah, u doodaya shaqo helid cadaalad ah iyo caawimaad ugaarsi shaqo.
Waa maxay sharciga gobolka Washington?
59.21 RCW Sharciga Caawinta Dib u Dejinta Guryaha Guurguura
365-212 Xeerka Maamulka Dib u Dejinta ee WAC
59.22 Iibsiga Beerta Deggane RCW
Sharciyada Kalfadhiga 2019
Cutubka 342, Sharciyada 2019 (ESHB 1582) - Akhriso kuweenna Soo Koobida Hawlaha Ganacsiga ESHB 1582 Wixii macluumaad dheeraad ah.
Cutubka 390, Sharciyada 2019 (ESSB 5183) - Akhriso kuweenna Soo Koobida Hawlaha Ganacsiga ESSB 5183 Wixii macluumaad dheeraad ah.
Caawinta Codsiga Dib u Dejinta iyo Helitaanka Guri Cusub
Aptfinder.org - Macluumaadka guryaha ee la awoodi karo.
Ururka Maamulka Guryaha ee Washington (AWHA) - AWHA waxay bixisaa liistada hay'adaha guryaha ee maxalliga ah.
Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka (HUD) 80% Aagga Dakhliga Dhexe (AMI) - Codsadayaasha Caawinta Dib u Dejinta waa inay lahaadaan dakhli reerkoodu ka hooseeyo 80% AMI degmada ay guryahoodu ku yaalliin.
Waaxda Shaqada iyo Warshadaha ee Gobolka Washington / Guryaha la soo saaray & Qaabdhismeedyada kale ee Mobilada - Shaqaalaha iyo Warshadaha waxay hayaan macluumaad ku saabsan guuritaanka iyo rakibidda guryaha.
Haddii aad ka warqabto ilo dheeri ah oo ku caawin kara inaad ku darto liiskan, fadlan nagala soo xiriir omh@commerce.wa.gov, lacag la'aan 1-800-964-0852, ama 360-725-2971.
Ogeysiiska Xidhitaanka ee Template kireystayaasha
Ogeysiiska Xiritaanka ee Kireystayaasha Template ("Ogeysiis") waa inay u adeegsadaan milkiileyaasha guryaha ee soo xiraya ama u beddelaya bulshada guryahooda ay soo saareen / guurguurayaan July 28, 2019. Fadlan arag Cutubka 342, Sharciyada 2019 (ESHB 1582) iyo RCW 59.20.080 ka dhaafida shuruudahan. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ogeysiiska shuruudaha sida waafaqsan RCW 59.21.030.
Ogeysiiska Xiritaanka Template Kireystayaasha (Ingiriis) (PDF)
Ogaysiiska sidoo kale waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda:
MODELO DE NotIFICACIÓN DE CIERRE PARA LOS ARRENDATARIOS (Isbaanish) (PDF)
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ (Ruush) (PDF)
MẪU THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ (Fiyatnaamiis) (PDF)
ШАБЛОН СПОВІЩЕННЯ ОРЕНДАРІВ ПРО ЗАКРИТТЯ (Yukreeniyaan) (PDF)
수신 폐쇄 통보 템플레이트 (Kuuriyaan) (PDF)
LIFIXA NG ABISO NG PAGSASARA PARA SA MGA KIRADA (Filibiin) (PDF)
نموذج إشعار إغلاق للمستأجرين (Carabi) (PDF)
Pun ਨਮੂਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗਾਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (Punjabi) (PDF)
KOJELLA KIN KILŌK EE KEIN JERBAL EO AN ARMIJ RO REJ JOKWE (Marshallese) (PDF)
承租人 的 关闭 通知 模板 (Shiino Fudud) (PDF)
租戶 的 結業 通知 模板 (Shiino-Dhaqameed) (PDF)
Ogaysiiska waxaa lagu heli karaa marka la codsado isagoo daabacan.
Noocyada la tarjumay ee dukumintigan waxaa bixiya Waaxda Gobolka Washington ee Nidaamyada Ganacsi 'iibiye la oggolaaday.
Si aad u codsato Ogeysiiska oo daabacan ama talo soo jeedin ku saabsan hagaajinta tarjumaadda Ogeysiiska, fadlan la xiriir Xafiiska Caawinta Dib-u-Dejinta ee Guryaha Soo-saarista / Moobilka omh@commerce.wa.gov, oo lacag-la’aan ah 800-964-0852, ama 360-725 -2971.
Macmalay / Macluumaadka Bulshada Guriga Guurguura
Liistada Xidhitaanka Bulshada Guriga Soo Saaray / Mobile (PDF)
Diiwaangashan Soosaarista / Guryaha Guurguura ee Diiwaangashan Washington (Excel)
Adiga iyo deriskaagu ma xiisaynaysaan inaad iibsataan xaafaddaada / gurigaaga gudihiisa la soo saaray / guurguura?
Ururada soosocda waxay bixiyaan kaalmo farsamo ama maalgalinta si loo ilaaliyo bulshooyinka guryaha soo saaray / guurguura ee gobolka Washington.
Komishanka Dhaqaalaha Guriyeynta ee Gobolka Washington / Sanduuqa Maalgashiga Beesha ee Soosaaratay (Bog)
Xarunta Horumarinta Iskaashatooyinka Northwest / ROC Northwest (Bog)
Machadka Greenfield (Bog)
Khadka Adeegga otomaatiga ah
Ganacsiga / Soosaarka iyo Caawinta Dib udajinta Guryaha Guurguura